क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले अस्पतालभित्रै पिसीआर परीक्षण गर्ने | PBM News.com
क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले अस्पतालभित्रै पिसीआर परीक्षण गर्ने
चितवन,२४ भदौं । भरतपुर स्थित वीपी कोइराला मेमारियल क्यान्सर अस्पतालले अस्पताल भित्रै पिसिआर परीक्षणगर्ने व्यवस्थापन गरेको छ । आजै एक कार्यक्रमका बीच पिसिआर उपकरणको उद्घाटन समेत गरिएको छ ।
वीपी जयन्तीको अवसर पारेर अस्पतालमा रहेको पिसीआर प्रयोगशालाको उद्घाटन गरिएको हो । बीपीकै नामबाट स्थापना भएको सो अस्पतालले उनको १०७ औँ जन्मजयन्तीको अवसर पारेर प्रयोगशाला उद्घाटन गरिएको अस्पतालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णसागर शर्माले जानकारी दिए ।
सोही प्रयोगशालामा पहिलो कोरोना सङ्क्रमित भइ र निको की अस्पतालकै नर्स पूजा श्रेष्ठ र आजबाटै अस्पतालमा आएको चिनियाँ मेडिकल टिम लिडर डा. झाङ वीले प्रयोगशालाको उद्घाटन गरे । सो अवसरमा अस्पतालका अध्यक्ष डा. निर्मल लामिछाने, कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतम, सञ्चालक समिति सदस्य डा. विनय ठाकुरलगायत विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
अस्पतालले प्रयोगशाला गत आइतबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो । हालसम्म ३ सय ९२ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको गौतमले जानकारी दिए । अस्पतालले पिसीआर परीक्षण शुल्क रु तीन हजार ५०० तय गरेको छ । एक दिनमा ४०० सम्म नमूनाको परीक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सो अस्पतालमा देशभर र भारतबाट समेत बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन् । पिसीआर परीक्षण गरेर मात्र अस्पतालले उपचार थाल्ने गरेको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राणा:राष्ट्रपतिको पछिल्लो भूमिकाले निष्पक्ष संस्थाको महत्व बढेको छ
मलेसियामा तीजको रमझम सूरु / अगस्ट १८ तारिखमा केलाङमा तीज विशेष कार्यक्रम हुने
दाउरा टिप्न जाँदा नारायणी नदीले बगाएर एक व्यक्ति बेपत्ता
सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ
जम्मू कश्मीर मामिला प्रति नेपाल सरकारको चासो बढ्दै